ငွေတိုးပေးသူအချို့ ပူပန်နေ | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Posted by Unknown at 12:38:00 PM0comments
ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာနှင့် ဈေးများအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ ငွေတိုးချေးသူများနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော် တွင် ဆွေးနွေးမှုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း အတိုးချေးသူများကြား ပူပန်မှု ပိုများလာကြောင်း ယင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်း ရရှိသည်။
မှတ်ပုံတင်လိုင်စင်မဲ့ ငွေတိုးချေးစားသူများအား ခွင့်ပြုချက် မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ ငွေတိုးချေးစားပါက The Money LendersAct. 1945 ပုဒ်မ ၅ နှင့် ပုဒ်မ ၆ အရ အရေးယူနိုင်ပြီး အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၄အရ လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ငွေတိုးပေးသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “သတင်းစာမှာပါ လာတော့ ချေးတဲ့သူဘက်က မရိုးသားတဲ့သူတွေ ပါလာတယ်။ နိုင်ငံတော်အနေ နဲ့ ပြည်သူဘက်က ဆိုတော့ ငွေရှင် ဘက်မှာ ဥပဒေဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ချေးတဲ့သူအချို့က တိုင်ချင်ရာ တိုင် ဖြစ်လာတယ်”ဟု ဆိုသည်။
သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိပါက The Money Lenders Act. 1945 အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သုံးလထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ကျခံနိုင်ပြီး အသေး စားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ အရ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငါးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“အခုကျတော့ ပေးတဲ့သူတွေကလည်း သိပ်မပေးချင်ကြတော့ဘူး။ အတိုးယူတဲ့သူ တချို့က လည်း ပြန် မပေးချင်ကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေကလည်း ဆုံးမှာစိုးလို့ မပေးဘဲနေတဲ့ သူတွေ လည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝရပ်သွားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပေးလက်စလူတွေကို ဆက်ပေးနေတာတော့ရှိတယ်။ လူတိုင်းကိုတော့ မပေးရဲကြတော့ဘူးပေါ့”ဟု မော်ကျွန်းမြို့နယ်တွင် အတိုးပေးနေသော လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး က ပြောသည်။
လိုင်စင်မဲ့လုပ်ကိုင်ပါက ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူနိုင်ကြောင်း ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ၌ ဆွေးနွေး ခဲ့သည့်အပေါ် ငွေတိုးချသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ချေးငွေများ ဆုံးရှုံးမည်ဆိုပါက ဥပဒေကြောင်း အရ ပြန်၍ရရှိရန် အခြေအနေနည်းပါးသည့်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်လာကြသည်။ ထို့အပြင် ငွေချေးယူသူအချို့ ကလည်း ငွေချေးသူမှာ တရားမ၀င် ငွေချေးသူများဖြစ်၍ ပြန်မဆပ်လျှင်ပင် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆို အရေးယူရန် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်ကိုသိ၍ ငွေပြန်မဆပ်တော့ဟု ပြောခြင်း၊ ငွေမဆပ်၍ တရားစွဲဆိုက စွဲနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်မှုအချို့ ရှိလာသည်ဟု ဆိုသည်။
ငွေထုတ်ချေးသူအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ငွေကြေးအားလုံး ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် အတိုးနှုန်းများ ကိုလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် မတ်တိုး၊ နေ့ပြန်တိုး၊ ၁၂ ရက်အပြတ် ပေးချေရသော ငွေချေးပုံစံတို့ဖြင့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အတိုးတို့ဖြင့် ထုတ်၍ချေးသည်။
ငွေတိုးချသူများအနေဖြင့် ချေးငွေယူသူများအား ငွေယုံကြည်အပ်နှံခြင်း စာချုပ်တို့ဖြင့် ချုပ်ဆိုကာ ငွေချေး ယူသူ ဘက်မှ လိုက်နာမှုမရှိပါက ယုံကြည်အပ်နှံမှု ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက် ပုဒ်မ ၄၀၆ နှင့် လိမ်လည် မှုပုဒ်မ ၄၂၀ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ယုံကြည်အပ်နှံခြင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်လို့ ပြစ်မှုမြောက်တဲ့အတွက် ထောင်ကျသွားတာတွေရှိတယ်။ ပိုက်ဆံ ယူတဲ့ သူတွေ ကို ပုဒ်မနှစ်ခုနဲ့ စွဲချက်တင်တယ်။ ငွေတိုးချေးတဲ့သူတွေ အများစုက စာချုပ်တစ်စောင်ပဲ ချုပ်တယ်။ ချေးတဲ့သူတွေကို မပေးဘူး”ဟု ရှေ့နေဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)ကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ချေးငွေများအား ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်သူ များမှတစ်ဆင့် ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးသော်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ပြည်သူလက်ထဲ တိုက် ရိုက်ေ ရာက် ရှိ မှု နည်းပါးသည့်အတွက် ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ငွေချေးသူများထံမှ အဆမတန် အတိုးနှု န်းဖြင့် ချေး ယူကြရလေ့ရှိသည်။
“အစိုးရက ချေးငွေပေးတာ အန်တီတို့မရဘူး။ သူတို့အချင်းချင်း ပတ်သက်ရာလူတွေပဲပေးတာ။ တကယ် တမ်း အန်တီတို့လက်ထဲ မရောက်ဘူး။ ဒီတော့ ရပ်ကွက်ထဲကပဲ ယူတော့တယ်။ ပေါင်စရာပစ္စည်းမရှိတော့ အပေါင်ဆိုင်မသွားနိုင်ဘူး”ဟု လှိုင် သာယာမြို့နယ်နေ ဒေါ်တင်ထွန်း က ပြောကြားသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ဒေါ်သန်းသန်းဦးကလည်း “အဒေါ်တို့ဆို ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲ က ငွေချေးတဲ့သူဆီကပဲ ယူတယ်”ဟု ရှင်းပြသည်။
ဥပဒေဘောင်အတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးမထားသည့်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုကာမိရန် အတိုးနှုန်းပိုယူသ ည့်အ တွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာမှုများ ရှိနေကြောင်း ငွေတိုးချေးငှားသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အတိုးနှုန်းများတယ် ဆိုတာကလည်း ချေးတဲ့သူဘက်က မပေးရင် အရင်းနဲ့အတိုးက အတော်လောက် ကျသွားမယ်။ အကယ်၍ ပြန်မဆပ်လို့ တရားရုံးရောက်ရင်လည်း ကိုယ်တွေမှာ လိုင်စင်မရှိတဲ့အတွက် ကြားထဲက ရှေ့နေ၊ တရားသူကြီးတွေပဲ စားသွားတာ။ သူတို့က အမှုကိုခြောက်လ၊ တစ်နှစ်ထိ ဆွဲပြီး ကာမှ နောက်ဆုံး ဤအမှုကို ပလပ်လိုက်သည်ဟုဆိုပြီး ပြီးသွားတာ။ ဒီတော့ ငွေရှင်ဘက်က အများကြီး ဆုံးရှုံး သွားတယ်”ဟု သုံးခွမြို့အတွင်းရှိ ငွေတိုးပေးသူ ဦးနိုင်လင်းဦးကပြောသည်။
ရှေ့နေဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)ကလည်း “ချေးတဲ့သူတွေက ပိုက်ဆံပြန်လိုချင်တော့ ငွေယူတဲ့သူတွေကို တရား မကြောင်းအရ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲတယ်။ အချို့ကတော့ အမှုအတောအတွင်း ပြန်ဆပ်တယ်။ တချို့ က အမှုပြီးတောင် ပြန်မဆပ်လို့ ၀ရမ်းထုတ်စစ်ရတယ်”ဟု ဆိုသည်။
“နယ်တွေမှာတော့ အတိုးပေးတာကို ဥပဒေတွေ ထွက်တာ၊ မထွက်တာကိုလည်း မသိဘူး။ အဆင်ပြေသ လိုပဲ လုပ်နေကြတာ။ ပေးတာလည်း နှုတ်ကတိတွေနဲ့ပဲ ပေးနေကြတာ များပါတယ်။ ပေးကတည်း က သေချာတဲ့ သူကိုပဲ ရွေးပေးတယ်။ နယ်ကလူတွေဆိုတော့ တရားဝင်တာ၊ မ၀င်တာ မသိဘူး။ ပေးနေကြရတာပဲ။ ယူတဲ့သူတွေကလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မရမှာစိုးလို့ ပုံမှန်ပြန်ကြတာ များပါတယ်”ဟု နယ်ဒေသများတွင် အကြွေးပေးနေသော စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး မြောင်မြို့နယ် မယ်မသော်ကျေးရွာမှ အတိုးပေးထားသူက ပြောသည်။